Home Wararka Maxkamada Maraykanka oo diiday dalabka Soomaali Masiixiyiin sheegta, lana amray in la...
Maxkamada Maraykanka oo diiday dalabka Soomaali Masiixiyiin sheegta, lana amray in la masaafuriyo
Maxkamada Sare ee loo yaqaano wareegga siddeedaad (8th Circ.) ayaa diiday Arbacadii in ay dib u eegis ku sameeyso codsiga nin Soomaali ah oo uu ku codsaday in la joojiyo amarka ah in loo tarxiilo dalka Soomaaliya uu markiisii hore ka yimid.
Ninkaan ayaa ku doodaya in hadii dib loogu celiyo dalka Soomaaliya ay dilayaa dadka Soomaaliyeed maadaama dadka Soomaalida ayan jeclaynin qof sheegta in uu ku biiray diidnta masiixiga.
Garsooraha maxkamada ayaa sheegay in kiiska tarxiilka ninkaas uu yahy mid sax ah, dib u eegis kama danbeys ahna lagu sameeyay. Maxkamada ayaa ku adkeysatay go’aankeeda iyada oo sheegaty in in xitaa haddii markhaatifurka ninkaasi uu keeno ayan waxba ka badali doonin go’aanka maxkamada.
Maxkamada ayaa ku dooday in in hadii ninkaa loo tarxiilo Soomaaliya uusan la kulmi doonin jirdil ayanna muuqan sababo Soomaali u disho ninkaas sababtoo ah Caqiidada Masiixiga ayuu aaminsan yahay.
Xukun gaaban oo ay soo saareen Arbacadii, saddex garsoore ayaa si wada jir ah u ansixiyay go’aanka Guddiga Socdaalka ee Racfaanka ku diiday codsiga Cabdirisaaq Daahir Jaamac ee dib u dhigista musaafurinta ee hoos timaada Axdiga ka dhanka ah Jirdilka. Maxkamadda laanta socdaalka ayaa xukuntay in sheegashada Jama ay u badan tahay in si gaar ah loo weeraray sababo la xiriira caqiidadiisa Masiixiga, diiwaanka dembiga ka hor iyo maskaxdiisa.
Previous articleA Message to the Congress, on the Continuation of the National Emergency with Respect to Somalia
Next articleRooble hadii uusan adeegsan karin awoodahiisa dastuuriga, waa inuu is-casilaa!
Kheyre Iyo Fahad oo Siraya Axmed Madoobe